Suugaan Sheeko: Qaybaha Qisada | Suugaanta hadda jirta
Encarni Arcoya | | Suugaanta, dhowr
Kumaa qora qoraalada tiraabta waa inuu si fiican u ogaado waxa sheeko sheeko y waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Xitaa sidaas oo ay tahay, gaar ahaan bilowga iyo qorayaasha da'da yar waxaa caadi ah in cilladaha lagu arko sheekada. Haddii aad rabto in shaqadaada soo socota lagu garto inaad leedahay sheeko wanaagsan, joog oo akhri maqaalkan aan maanta kuu soo bandhigeyno oo ogow waxa ay yihiin waxyaabaha aasaasiga ah ee ka kooban sheeko kasta.
1 Asalka nooca sheekada
2 Astaamaha nooca sheekada
2.1 Waxyaabaha sheeko xambaarsan
3 Sheekeeye iyo jilayaasha: labada shay ee ugu muhiimsan nooca sheekada
Asalka nooca sheekada
Hadda oo aad wax yar ka ogtahay nooca sheekada, waa inaad ogaataa inay asal leedahay. Waxaan ka hadalnaa Da 'dhexe, iyo gaar ahaan Yurub, oo ah qaarad ay ka bilaabatay in laga isticmaalo meelaha qaarkood iyada oo ujeedadu tahay in la xasuusto dhacdooyinka taariikhiga ah, caadooyinka, jilayaasha geesiyaal ahaa, kabtanadii waaweynaa iyo halyeeygoodii geesinimada lahaa ...
Si kastaba ha noqotee, waxaa la ogyahay in, Giriigga, Homer wuxuu ahaa kii dhaliyay noocan sheekadan, In kasta oo uu ahaa qof yaqaan yaqaan sida laysku daro dhowr nooc (riwaayad, qisooyin, sheeko ...) isla qoraalka, wax qorayaasha aad u tiro yar ay ku gaaraan heer aqoonyahanno ah.
Waxa ugu fiican ee tan ku saabsan ayaa ah in, markii shaqooyinka sheekadu bilaabeen inay muuqdaan, ay dhalisay koror ku yimid dhalinyarada doonaya inay naftooda ku bilaabaan qoritaanka noocaas; iyo sidoo kale tiro aad u tiro badan oo akhristayaal ah oo jecel, sidaa awgeed ayaa loo horumariyey sida aan hadda ku naqaan.
Astaamaha nooca sheekada
In sheeko shaqaysa, sheekeeye ayaa soo bandhigaya ficil ama taxane dhacdooyin ah oo jilayaal taxane ah oo ku yaal meel la siiyay iyo inta lagu jiro waqti horay loo dejiyay ka qaybqaadashada. Dhammaan qaybahaani waxay noqdaan cunsurrada sheekada (oo aan si faahfaahsan hoos ugu arki doonno).
Sheeko suugaaneed waxaa lagu gartaa dib-u-abuurid adduun male-awaal ah, inkasta oo xaaladaha qaarkood ay yihiin xaqiiqooyinka ay dhiirrigelisay xaqiiqda. Xitaa sidaas oo ay tahay, weli waa sheeko mala-awaal ah maxaa yeelay qoraagu had iyo jeer wuxuu gacan ka geystaa dhacdooyin cusub oo la alifay ama wuxuu ku eedeeyaa runta nuyuusyo qaas ah oo sidaas darteed wuxuu joojiyaa inuu ahaado 100% dhab ah.
Astaamo kale oo noocan ah qoraalka ah ayaa ah in qofka saddexaad sida caadiga ah la isticmaalo, in kasta oo qofka ugu horreeya uu waliba soo noqnoqdo marka jilaaga ugu weyn ee sheekadu yahay sheekha buugga.
In kasta oo markii hore ku jirtay sheekada sheekada ay ahayd wax caadi ah in la helo aayadaha, maanta kuwa ugu caansan ayaa ah in sheekada lagu qoro gebi ahaanba tiraab.
Waxyaabaha sheeko xambaarsan
Waxyaabaha ka kooban sheeko waa kuwan soo socda:
Weriyaha: Waxay noqon kartaa mid bannaanka u ah ficilka, haddii ay la xiriirto dhacdooyinka qofka saddexaad iyadoo aan ka qaybqaadan, ama gudaha, markay la xiriirto dhacdooyinka qofkii ugu horreeyay sida halyeeyga ama markhaatiga dhacdooyinka. Weriye dibadeed badanaa waa sheekeeye aqoon oo yaqaan wax walbana ka yaqaan dhammaan astaamaha shaqadda ka kooban, oo ay ku jiraan fikirradoodii iyo waxyaabihii u dhowaa
Calaamadaha: Iyagu waa kuwa kiciya dhacdooyinka kala duwan ee aan u aragno in lagu sheekeeyay riwaayadda. Astaamahiisa waxaa lagu gudbiyaa ficiladeeda, wadahadalka, iyo sharaxaada. Jilayaasha dhexdooda, jilaaga marwalba wuu istaagaa, yaa ah kan xambaara culeyska ficilka iyo antagonist-ka kasoo horjeeda. Sidoo kale, waxay kuxirantahay shaqada, waxaan heli karnaa inbadan ama kayar jilayaasha labaad.
Qisada sheekada ama ficilka Waa iskudhafka dhacdooyinka ka dhaca sheekada. Dhacdooyinkan ama dhacdooyinkaani waxay ku yaalliin waqti iyo meel bannaan, waxaana loo habeeyay qaab-dhismeed fudud sida sheekooyinka ama sheekooyinka, ama ka sii murugsan, sida buugaagta.
Waxyaabaha aan soo aragnay ka sokow, waxaa jira kuwo kale oo iyaguna muhiim u ah qaabkan suugaaneed, oo guud ahaan loo isticmaalo qeexidda, ma aha oo keliya marka wax la akhrinayo, laakiin sidoo kale marka la qorayo. Kuwani waa:
Dejintu waxay la xiriirtaa goobta, daqiiqadda, xaaladda ... ee uu qorshuhu ka dhacayo. Taasi waa, waxaad akhristaha u dhigeysaa booska meesha dhagarta ay ka dhaceyso, sanadka uu dhacayo, nooca siyaasadeed iyo bulsho ee jira, iyo sida jilayaasha u nool yihiin.
Mararka qaar, qorayaashu waxay iska indhatiraan cunsurkan, laakiin waxay u daayaan buraashyo garaacis ah oo akhristaha, markuu akhrinayo, u sameeyo fikradda xaaladda. Marar badan waxay noqoneysaa ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ah marka loo eego kuwa la haysto.
Si kastaba ha noqotee, aad ayey muhiim u tahay in la siiyo adkeyn dheeraad ah qorshaha maaddaama ay bixinayso waxyaabo kala duwan oo ka caawiya sidii loo horumarin lahaa dhammaan astaamaha.
Qaabku waa habka uu qoraagu ugu hormaro dhanka sheekada. Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka hadlaynaa shaabadda qoraha, qaabkiisa uu u adeegsanayo luqadda, ilaha suugaanta ... Marka la soo koobo, qoraalkiisa.
Qoraa kastaa waa adduun, mid walbana wuxuu leeyahay hal dariiq ama mid kale oo qoraal ah. Taasi waa sababta, markaad wax akhrinaysid, aad jeceshahay ama aad nacsiinayso sheeko, haddana haddii aad mid kale oo isku qaab ah qaadatid, waxaad u yeelan kartaa dareenno kale.
Tusaale ahaan, waxaa jira qoraayo saxeexooda qaabku yahay in ereyo lagu muujiyo dareenno badan; halka kuwa kalena aysan awoodin inay sidaa sameeyaan oo ay ku kooban yihiin inay noqdaan dad wax sharraxaya si akhristaha uu u haysto dhammaan xogta oo uu dib ugu celiyo maskaxdiisa waxa uu akhrinayo si uu ula kulmo waxa jilayaashu dareemi karaan.
Ugu dambeyntiina, tan ugu dambeysa ee walxaha ku jira sheekada sheekadu waa dulucda. Kani waa la xiriira dhagarta iyo dhagarta, Si kale haddii loo dhigo, waxaa lagu qeexi doonaa taariikhda lafteeda. Hadana waxay kuxirantahay kiiska, waxaad gali kartaa jaceyl, taariikhi, dambi-baare (ama sheeko fal-dambiyeed), sheeko-saynis, sheeko naxdin leh ...
Waxaas oo dhami waa muhiim in la ogaado tan iyo, xitaa haddii ay sheekadu kalabar u dhexeyso laba mawduuc, had iyo jeer way wanaagsan tahay in la ogaado halka loo dhigayo, labadaba si ay akhristayaasha qaabkani u helaan, iyo si aad ugu tagto daabacaado kala duwan ama u daabacdo iyada oo dooro kuwa ku habboon qaybaha.
Sheekeeye iyo jilayaasha: labada shay ee ugu muhiimsan nooca sheekada
In kasta oo aynaan ka hor intaanan ka wada hadal sheekada iyo jilayaasha, laba ka mid ah walxaha ugu muhiimsan ee ku saabsan sheekada, waxaan jeclaan lahayn inaan wax yar ka sii ogaano iyaga. Waana sida ama ka muhiimsan sheekada sheekada lafteeda. Xaqiiqdii, inkasta oo tan dambe ay tahay mid asal ah oo si fiican looga fikiray, haddii weriyuhu awoodi kari waayo inuu meel dhigo akhristaha, astaamuhuna aan si dhab ah loo horumarin, sheekada oo dhami way dhuuxaysaa oo uumi lumaysaa.
In kasta oo aan soo sheegnay in weriyaha nooca sheekada badanaa lagu qoro qofka saddexaad, ama xitaa qofka koowaad (labadaba kali), runtu waxay tahay in sidoo kale lagu qori karo qofka labaad. Si ay kuugu fududaato inaad fahamto:
Qofka koowaad: Weriyuhu sidoo kale waa astaamaha ugu muhiimsan ee sheekada, taas oo ka dhigaysa shaqada oo dhan inay diiradda saarto isaga ama nafteeda, si wax looga barto dareenka, fikradaha iyo ficillada la arko.
Tani sidoo kale waxay leedahay dhibaato, taasna waa inaadan si buuxda u horumarin karin astaamaha kale maaddaama ay tahay inaad diiradda saarto waxa dabeecadda weyn u maleynayo / sameynayo / muujinayo.
Qofka labaad: Looma baahna noocyadan, laakiin waxaad ka heli kartaa buugaag halka loo isticmaalo iyo, waxay u adeegsaneysaa adiga adiga tixraac ahaan, oo la xiriira qof, shay ama xayawaan.
Qofka saddexaad: Waa tan ugu badan ee la isticmaalo sababtoo ah waxay runtii u oggolaaneysaa in la horumariyo dhammaan astaamaha iyo dhammaan xaqiiqooyinka. Waa waddo loogu talagalay akhristaha oo keliya in uu u damqado qofka jilaya, laakiin sidoo kale mid kasta oo ka mid ah jilayaasha. Sidan oo kale, wuxuu noqdaa kaliya daawade ka sheekeynaya waxa dhacaya, waxay yiraahdaan, jilayaasha waaya-aragnimo, labadaba geesiyaal iyo sare, jaamacad ...
Xaaladaha jilayaasha, sidaad ogtahay, shaqo nooc sheeko sheekoyeed leh astaamo badan. Laakiin waxaa jira dhowr tirooyin si loo kala saaro. Kuwanuna waa:
Protagonist: Dabeecada qofka sheekada loo sheegay ay dhacdo. Si kale haddii loo dhigo, waa codka heesta shaqada. Halyeeygaan marwalba waa qof, xayawaan, shay ... Laakiin mid kaliya. Si kastaba ha noqotee, taariikhda suugaanta waxaa jiray shaqooyin badan oo halkii, hal halyeey, ay jireen dhowr.
Falanqeeye: Sida ay yiraahdaan, geesin kasta wuxuu u baahan yahay sharwadayaal. Qofka ka soo horjeedana waa "sharwadayaal", qofka ka soo hor jeeda halyeeyada oo doonaya inuusan guuleysan. Mar labaad waxaan ku laabaneynaa tan kor ku xusan, caadiyan waxaa jira hal "xun" oo keliya, laakiin waxaa jira shaqooyin badan oo ay ku jiraan wax ka badan hal.
Dabeecad firfircoon: Qaabkan loogu yeerayo waa sida astaamaha muhiimka ah ee labaad loo qeexi lahaa. Iyagu waa jilayaal buuxinaya si loo siiyo adkeyn buuxda guud ahaan, laakiin taasi, adoo firfircoon oo la socda halyeeyada iyo kuwa ka soo horjeedka, waxay noqdeen aalad awood leh oo jihada tallaabooyinka sheekada u jiheysa dhanka aad rabto.
Jilayaasha ma guurtada ah: Waxaan dhihi karnaa waa jilayaasha jaamacadaha, kuwa la xusay dhowr jeer laakiin runtii aan gacan weyn ku laheyn sheekada, laakiin waa uun qaab lagu helo goobta iyo jilayaasha, laakiin aan saameyn ku yeelan.
Taasi waxay tidhi, waa maxay qaybta ugu adag ama curinta sheeko la soo koobi karo? Miyaad ka mid tahay kuwa marka hore shirqool haysta ka dibna ku daraya jilayaal ama lid ku ah? Si kooban ii sheeg sida aad ugu wajaho shaqadaada bilowgeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Nooca sheekada: Qaybaha sheekada
Fernando Cuestas sawirka meeleynta dijo
Carmen, xagee wax kuugu soo qori karaa?
Ku jawaab Fernando Cuestas
Oh, maxaa kugu dhacaya aniga iyo hooyaday daanyeer qliao te vai funao iyo cana pa la qabriga
Jawaab Corxea Champuru
wenas cabros del yutu waxaan ahay corxea champuru subscribe to my yutu channel with all the attitude
oe ey qliao sawirka gabadha waxaan ku sawiraa daanyeer ctm etsijo copirai
ukunta yar dijo
Ku jawaab huevito rey
wanaagsan kabros ktm
Ku jawaab charifa
tixraacyada bibliographic fadlan
Ku jawaab eliana
ElPepe (Anigu waxaan ahay ElPepeOriginal) dijo
Awea adiga, waxaan filayay nooc kale oo faallooyin ah eta mahian wes
Jawaab ElPepe (SoyElPepeOriginal)